Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) - Page 16 of 20 - Hello Sayarwon
Khine Phoo Ngon မှ ရေးသားသည်။2ပတ် အကြာက တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ကဘာလဲ။
အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးခြင်း ဆိုတာဟာ အသက် ၄၀ မပြည့်ခင်ကတည်းက သားဥအိမ်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပျက်စီးသွားတာ၊ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့တာ ကိုဆိုလိုပါတယ်။ သားဥအိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါ ပုံမှန်အတိုင်း အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း မထုတ်နိုင်တော့တဲ့ အပြင် သားဥလေးတွေကို လည်း ပုံမှန်မထုတ်ပေးနိုင်တော့ ပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် မျိုးမအောင်ခြင်း ဆိုတာ ဖြစ်လာရပါတယ်။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီလို ဖြစ်တဲ့ အခြေအနေက ရှားပါးပါတယ်။ အသက် ၄၀အောက် အမျိုးသမီး အယောက် ၁၀၀ မှာ ၁ယောက်လောက်သာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရောဂါ ကို ဖြစ်ဖို့ အားပေးနေတဲ့ အချက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အချက်အလက်တွေ အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်လက်ဆွေးနွေး နိုင်ပါတယ်။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးခြင်းရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာတွေကတော့
ရာသီလာ၊ သွေးဆင်းချိန် မမှန်ခြင်း၊သွေးမဆင်း၊ရာသီမလာခြင်း စတဲ့အခြေအနတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အကြာကြီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်(သို့) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးမှ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (သို့) သန္ဓေတားဆေးတွေသောက်တာရပ်ပြီးနောက် မှာ လည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ကိုယ်ပူသလို ခံစားရခြင်း။
မိန်းမကိုယ် အတွင်း စွတ်စိုမှုမရှိဘဲ ခြောက်ကပ်နေခြင်း။
စိတ်ဆတ်ခြင်း(သို့) အာရုံစိုက်ရာတွင်အခက်အခဲ ရှိခြင်း။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဒီအခြေအနေကို ဘာတွေက ဖြစ်စေနိုင်သလဲ ဆိုတာ တိတိကျကျ မသိနိုင်ပေမယ့် တစ်ချို့သော အမျိုးသမီးတွေမှာ မျိုးရိုးဗီဇ (သို့) ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းရှိ ခုခံအားစနစ် နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပြသနာတွေက ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ခုခံအားစနစ် ချို့ယွင်းနေတာကြောင့်ဆိုရင်တော့ ခန္ဓါကိုယ်က သားဥအိမ်ကဲ့သို့သော မိမိကိုယ်ပိုင်တစ်ရှုးတွေကို ပြန်တိုက်နေတာကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါ။
ငါ့ဆီမှာ Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အချိန်မတိုင်ခင်မှာ သားဥအိမ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ဖို့ အားပေးနေတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
အသက်အရွယ်။ ဒီလို သားဥအိမ်ပျက်စီးခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေဟာ အသက် ၃၅ နှစ်မှ ၄၀ အတွင်းမှာ အရမ်းများပါတယ်။
မိသားစု နောက်ခံ။ မိသားစုထဲမှာ အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးတဲ့ရောဂါ ရှိဖူးတယ်ဆိုရင် သင့်အတွက်လည်း ဒီလို ဖြစ်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်ဆရာဝန်က သင့် ခန္ဓါကိုယ်ကို စစ်ဆေးချက်တွေလုပ်ဆောင်ပေးပြီး သင့်ကျန်းမာရေး၊ ရာသီလာ၊သွေးဆင်းတဲ့ အချိန်၊ နဲ့ သင့်သားဥအိမ် နဲ့ သားဥလေးတွေကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်မယ့် ကင်ဆာကုထုံး၊ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး စတဲ့ အဆိပ်အတောင့် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့မှု ရှိ၊မရှိ စတဲ့အချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးချက်၊ FSH စစ်ဆေးချက်၊ estradiol စစ်ဆေးချက်၊ prolactin စစ်ဆေးချက်၊ karyotype နဲ့ FMR1 ဗီဇ စစ်ဆေးချက်တွေကို လည်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။
Premature Ovarian Failure (အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ် ပျက်စီးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးသွားခြင်းကို ကုသတဲ့အခါမှာ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်းလျော့နည်းသွားလို့ဖြစ်တဲ့ ပြသနာတွေအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ကုသလေ့ရှိပါတယ်။ ဆရာဝန်က အောက်ပါကုသနည်းတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အီစထရိုဂျင် ပေးပြီး ကုသခြင်း။
အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးသွားခြင်း ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ?
အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးသွားခြင်း ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မယ့် နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ အိမ်သုံးဆေးနည်းလမ်းတွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။
ကလေးယူဖို့အတွက် အခြားနည်းလမ်းတွေ လေ့လာပါ။ တကယ်လို့ သားသမီးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခြားသူဆီက လှုဒါန်းတဲ့ သားဥကို အသုံးပြုပြီး သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်း
(သို့) မွေးစားခြင်း စတဲ့ ကလေးရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို ဆရာဝန်ဆီကနေ အကြံဉာဏ်တောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အချိန်မတိုင်ခင် သားဥအိမ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေထဲက % အတော်နည်းနည်းမှာ အလိုလို ကိုယ်ဝန်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သန္ဓေတားလမ်းတွေ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အဲလိုတားတဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲကမှ ဘယ်နည်းလမ်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ဆရာဝန်ဆီက အကြံတောင်းနိုင်ပါတတယ်။
သင့်အရိုးတွေကို သန်မာနေအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း အနည်းငယ်သာထုတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ အရိုးပွခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အရိုးတွေကို ကောင်းမွန်သန်မာစေမယ့် ကယ်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေစားပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။
Premature ovarian failure. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815011/.Accessed September 26, 2016.